/blog/Gallery/7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa ee Armodafinil
Posted on 09 / 11 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Amodafinil waa daroogo nafsaani ah oo ay soo saartay Pharmaceuticals waxaana lagu ansaxiyay FDA on June 15, 2007. Amodafinil waa (-) - (R) -enantiomer ee qaybta firfircoon ee daawada rasafinil ee rasmiga ah. Armodafinil waa isomer ee daawada modafinil (Progivil)
Budada Armodafinil, sida modafinil, wuxuu leeyahay saddex isticmaalka ugu weyn:
• Waxay kor u qaadaan soo jeedinta marka ay jiraan xaalado hurdo-darro xad-dhaaf ah iyo nikotoolin
• Waa daroogo loo isticmaalo daaweynta hoos u dhigidda carruurta iyo dadka waaweyn
• Waxaa loo adeegsadaa dadka waa inay sameeyaan isbeddelka isbeddelka, maadaama ay u ogolaato inay iska ilaaliso hurdada oo soo saari karta saacaddan isbedelka saacadda noolaha ee dadka.
• Waxaa isticmaala ardayda qaarkood si loo hagaajiyo xoojinta.
Shirkadda Cephalon sidoo kale waxay rabtaa oo qorsheyneysaa inay sameyso daraasado iyada oo ujeedkeedu yahay qiimeynta armodafinil (Nuvigil) daaweynta xaaladaha kale ee daba dheeraada sida cudurka laba-cirifoodka, shisoofrani, iyo sidoo kale hurdo iyo daal xaaladaha sida Parkinson's iyo kansarka.
Armodafinil Hordhac Compound
Armodafinil waa dhisme enantiomeric ah eugeroidal modafinil (Provigil). Waxay ka kooban tahay oo keliya (R) - (-) - enantiomer of racemic modafinil.
Magaca ganacsiga Nuvigil
Muuqaal jireed: midab cad
Meelaha karkaraya: 559.1oC at 760mmHg
Xalka Flash: 292oC
Cadaadiska uumiga: 1.56E-12mmHg at 25 C
Heerka xasaasiga ah: 1.645
Daawada ayaa loo ogolaaday Maraykanka si loogu daaweeyo hurdo-xumo badan oo maalintii ah bukaanka da'doodu ka weyn tahay sanadka 18 ee la xidhiidha hurdada 'apnea syndrome' (OSAS), miyir-qabad, ama shaybaar shaqaale.
Tilmaamaha fudud ee budada Armodafinil
Tilmaamida armodafinil waxay la mid tahay modafinil. FDA-da Mareykanka waxay qiraysaa almodafinil daaweynta narcolepsy, cilladda cillad la'aanta hurdada iyo cilladda hurdada shaqada, Alzheimer, dhibaatooyinka koritaanka.
Amodafinil waa L-mododafin waana maaddada ugu weyn ee firfircoon ee modafinil. 200 mg oo modafinil ah oo ku jira bidix iyo midig modafinil midkiiba waxaa lagu xisaabtamayaa nus, laakiin modafinil-midig waxaa loo isticmaalaa 4 saacadood, isticmaalka waa la dhimay, modafinil wuxuu qaatay 2 saacadood Saameynta ayaa ah in dhiiga ugu sareeya uu yahay gaadhay 4 saacadood gudahood. Marka ugu sarreysa, L-mododa waxay u dhigantaa 90%, iyo khafiifinta midigta midig kaliya waxay ka tagtaa 10%. Ka dib saacadda afaraad, Moda ayaa door weyn ka ciyaara. Waa L-mododafin. Saamaynta amodafinil waa mid aad u xoog badan. Haddii Moda isku dayo inuu soo jeedo, markaa Amoda wuu diiradda saari karaa oo wuu soo jeedaa, wuxuu diiradda saari karaa feejignaan dheeri ah, wuxuuna leeyahay saameyn aad u yar. Ugu dambeyntii, waxay beddeli doontaa modafinil. Amoda waxay leedahay seddex jibbaar borotiinada plasma, sidaas darteed waxay ugu xirnaan kartaa borotiinada plasma si aad isugu dhow. Sidaa darteed, isku soo ururinta amoda ee maskaxda ku galeysa dhiig ayaa aad u sareysa. Isku xirnaanta Amoda ee maskaxda ayaa seddex jeer ka badan tan Moda.
Nolosha nuska ah ee amodafinil waa saacadaha 13-15. Waxyeelada daawadu waa mid aad u yar.
Maamulida joogtada ah ee amodafinil, diirada daroogada ee dhiigga ayaa sii wadi doonta inay dillaacdo, sababtoo ah daroogada cusub ee daroogada dhiigga aan la dhigin, daroogada cusubi waxay gashay dhiigga, si joogto ah u qaadashada amodafinil waxay dib u dhigeysaa imaatinka daroogada dhiigga.
Armodafinil wuxuu kordhiyaa feejignaanta bukaanka la ildaran hurdo xad dhaaf ah. Waxay ku dhaqaaqeysaa saameynteeda iyada oo saameyn ku yeelata qaar ka mid ah qabtayaasha neurotransmitter-ka waxayna kicisaa nidaamka neerfaha naxariista leh. Habka saxda ah ee waxqabadka, sida Modafinil, lama yaqaan. In vitro, saameyn toos ah ama mid aan toos ahayn sida α 1 - aqbaliye - ama agonist qaataha daawada loo yaqaan 'dopamine receptor agonist' lama ogaan karo. Awoodda armodafinil si ay u ilaaliso soo jeedka waxay la mid tahay tan amphetamine, in kasta oo ay kaga duwan tahay muuqaalkeeda dawooyinka.
Nolosha badhka ah ee labada unanjiam ee modafinil waxay ku kala duwan yihiin qodobka 3 midba midka kale. Farmashiistaha Armodafinil waa qiyaas madaxbannaan oo qumman oo ku jira 50 illaa 400 mg. Daawada si dhakhso ah ayuu u nuugay, waxaana lagu qiyaasey beerka ilaa laba metabolitir oo waaweyn. Armodafinil iyo dheef-shiid kiimikaad hooseeya ayaa laga qaadaa inta badan kelyaha. Bukaannada qaba xanuun aan caadi ahayn ama xanuunka kalyaha daran, qiyaasta waa in la dhimo.
Armomafinil waa daawo afka ah. Suuqa, sida caadiga ah, qeexitaanka waa 50 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg. Dadka qaba miyirka, waa in lagu sameeyaa xNUMX-150 mcg maalintii.
Daawada Armodafinil waxaa lagu daaweeyaa cytochrome P450 3A4 waxaana sidoo kale la joojiyaa qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee cytochrome P450 enzyme. Waxaa jira suurtagal ah in lala xiriiro daawooyinka kale ee badan, taasoo markaa joojineysa ama metabolize isku midka cytochrome P450. Kuwaani waxaa ka mid ah uur-qaadista afka ee gaar ahaaneed, daawooyinka lagu daaweynayo xanuunka qalalida (anticonvulsants), daawada xinjirowga lidka ku ah (antioxulants), antidepressants ama suntlosporin immunosuppressant.
Waxyeellooyinka ugu badan ee la soo sheegay waxay ahaayeen: madax-xanuun, lallabo, madax-wareer, rabsho hurdo. Armodafinil wuxuu sababi karaa xasaasiyado aan caadi ahayn sida finan yaryar ama qandhada cawska. Dareen-celinta maqaarka daran ee aadka u daran, sida kuwa lagu arkay foomka rasmiga ah ee Modafinil, oo ay ku jiraan Stevens-Johnson syndrome, lagama yaabo in laga saaro ayna u baahan tahay joojin degdeg ah ee daaweynta.
1.Armodafinil iyo Modafinil waa daawooyin aan amfetamin ahayn oo kobciya baraarugga kana caawiya dadka inay u adkeystaan ​​xiiqda hurdada, narcolepsy ama lulmo xad dhaaf ah ayaa weli firfircoon. Markii hore, Modafinil waxaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo narkolepsiyada laguna hagaajiyo soo jeedka
2. Armomafinil waxaa lagu heli karaa qaabka 50 mg / 150 mg / 200 mg / 250 mg. Modafinil waxaa lagu heli karaa oo kaliya xmUMX / 100 mg.
3. Nolosha adeegga Armodafinil waa 15 saacadood, halka Kareemka Modafinil waa saacado 12. Saameynta Armodafinil waa saacadaha 8, halka Modafinil uu sii socdo 6 saacadaha 12.
4. Farmafinil wuxuu gaari karaa diirada ugu sarreysa, sababtoo ah helitaanka nidaamku wuu dheer yahay, muddada dheerna way ka badan tahay Modafinil. Intaa waxaa dheer, haddii aad qaadato mgmaanka 150 ee Armodafinil, mgmarka 200 ee Modafinil ayaa loo baahan doonaa. Sababtoo ah waxtarka muddada fog, Budada Armodafinil waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fiican labadaba, in kasta oo xirfadlayaasha caafimaadka ay sheegaan inay labadooduba isku mid yihiin, natiijooyinkuna inta badan waa isku mid.
Si loo go'aamiyo isticmaalka daawada, faa'iidooyinka isticmaalka waa in ay ka badan tahay waxyeellada, adiga iyo dhakhtarkaagu waa inay go'aamiyaan in isticmaalka daawada iyo haddii kale.
Waa inaad tixgelisaa:
Daraasado ku filan looma qabanin xiriirka u dhaxeeya da'da iyo saameynta cududafinil ee carruurta ka yar da'da 17 da'da. Nabadgelyada iyo waxtarnimada daroogadan ayaa weli aan la dhicin.
Inkastoo daraasad aan loo sameynin xiriirka ka dhexeeya da'da iyo saameynta ay ku leedahay dadka da'da weyn, haddana dhibaatooyinka la xidhiidha waayeelka ayaan la fileynin inay yareeyaan suurtogalnimada isticmaalka armodafinil ee dadka waayeelka ah. Si kastaba ha noqotee, bukaanno waayeel ah ayaa laga yaabaa in ay qaadaan ka qaadis yar oo daawadan ka timaadda jidhka, taas oo u baahan karto daawo qiyaas ah oo loogu talagalay bukaanada qaadata armodaphine.
Qeybaha kala duwan ee armodafinil ee uurka waa (C). Daraasaadka xayawaanku waxay muujiyeen saameyn xun, mana jirto baadhitaan ku filan oo ku saabsan uurka. Ma jiraan daraasado xayawaan ah, mana jirto daraasado ku filan oo ku saabsan uurka.
Ka digtoonow, lama ogaan karo haddii daroogadani ka baxdo caanaha naaska.
Isdhexgalka iyo isdhexgalka daroogada
Inkasta oo daawooyinka qaar aan loo isticmaali karin si joogto ah, xaaladaha kale waxaa la isticmaali karaa laba daroogo oo kala duwan xataa haddii ay leeyihiin isdhexgalka daroogada. Xaaladdan oo kale, dhakhtarkaagu wuxuu ku khasbanaaday inuu beddelo qiyaasta, ama taxadar kale oo loo baahan yahay. Marka aad qaadatid dawadan, waa muhiim in dhakhtarkaagu ogaado haddii aad qaadato wax ka mid ah daawooyinka hoos ku qoran. Isdhexgalkan soo socda ayaa lagu soo doortay iyada oo saldhig u ah mabaadii'da ay suurtagal tahay, taas oo ah mid aan loo baahnayn.
Daroogooyinka la falgalaya Budada Armodafinil
Daawooyinka qaarkood waa in aan loo isticmaalin gudaha ama agagaarka wakhtiga cuntada ama cunista cunnooyinka qaarkood sababtoo ah isdhexgalka u dhexeeya daaweynta iyo noocyada cuntooyinka qaarkood ayaa dhici kara. Isticmaalka khamriga ama sigaarka ayaa sidoo kale horseedi kara isdhexgalka daroogada. Kala hadal dhakhtarka sida isticmaalka daawadan adoo isticmaalaya cunto ama aalkolo, ama tubaako.
Dhibaatooyinka kale ee caafimaadka
Jiritaanka dhibaatooyinka kale ee caafimaad waxay saameyn karaan isticmaalka dawadan:
Murugada ama haysashada taariikhdaas, ama cadaadis dhiig oo sarreeya, qaloocsan, ama maskaxiyan: u isticmaal daawada taxadar. Xaaladahaan way sii xumaan karaan.
Hoos uur-galka bidix, ama hoos u dhac mitral ah: waa in aan loo isticmaalin bukaanka qaba xaaladahaan.
Cudurada beerka (daran): waxaa loo isticmaalaa taxadar. Saameynada daroogada ayaa kordhi karta sababtoo ah maqaarkiisa si tartiib ah looga saaro jirka.
Isticmaal sax ah
Qaado daawadan oo keliya sida uu dhakhtarku ku faray. Ha kordhin qiyaasta daawada, oo ha kordhinin tirada daroogada la qaato, oo ha u isticmaalin muddo ka badan dhakhtarka ayaa go'aansaday.
Daawadani waxay la socotaa Barta Warbixinta Bukaanka (Warqada Gudaha). Aad bay muhiim u tahay inaad akhrido oo aad fahamto macluumaadkaan. U hubso inaad weydiiso dhakhtarkaaga haddii aad su'aalo qabto.
Haddii aad qabtid hurdada hurdada oo aad isticmaasho cadaadiska marinka hawada ee joogtada ah habeenkii, sii wad inaad isticmaasho qalabkan daawo.
Qaado daawadan isla waqti isku mid ah maalin kasta. Ha baddelin wakhtiga qaadashada daawada adiga oo aan marka hore la hadlin dhakhtarkaaga.
Waxaad u qaadan kartaa dawadan adoo cunto ah ama aan lahayn.
Marka la raaco saameynta daaweynta ee daroogada, daawadani waxay dhalin kartaa saameyn aan loo baahnayn. In kasta oo aaney dhammaan dhibaatooyinka soo ifbaxaya ay dhici karaan, laakiin haddii aad sameyso, waxaad u baahan tahay daryeel caafimaad.
Si dhakhso ah ula tasho dhakhtarkaaga haddii mid ka mid ah waxyeelooyinka soo socda ay kugu dhaceen:
Nabaro, gubasho, dillaac, qallayl, ama maqaarka oo luma
Cuncun, kabuubis, ama dareemid murugo
Speed ama garaaca wadnaha oo aan joogto ahayn
kaadida joogtada ah
Madax xanuun daran oo leh xanaaq
Kordhi xaddiga kaadida
Cuncun, ama casaan daran, ama cirbad, ama maqaarka oo barara
Cadaadis xagga lugaha, gacmaha, gacmaha ama cagaha
Aad ayey muhiim u tahay in dhakhtarkaagu hubiyo horumarkaaga daawada ee booqashada joogtada ah si loo hubiyo in daroogadu si fiican u shaqaynayso iyo in la xaqiijiyo in aysan jirin saameyn aan loo baahnayn.
Dawadani ma beddeli karto si ay u hesho hurdo ku filan. Daawadan waa in la isticmaalaa oo kaliya haddii cudurku uu ku dhaco cilad murqo-darro ah, apnea systrome-ka oo waliba loo yaqaan (apnea syndrome), ama dhibaatooyinka hurdada ee uu keeno cudurka psoriasis.
Dawadani waxay sababi kartaa noocyo xasaasiyad oo aad u xun, oo ay ku jirto dhiig-baxa iyo bararka vascular.
Jooji isticmaalka dawadan isla markaana ka fiirso dhakhtarkaaga isla markiiba haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadaha soo socda: burka, feerka, jilicsanaanta maqaarka, qarqaryo, qufac, shuban, qandho, ama xanuun ama murqo xanuun. Ama dhaawacyada maqaarka cas. Ama dhuun xanuun; nabarrada, ama dhibco cad oo afka ama dibnaha. Ama daal aan caadi ahayn ama daciifnimo.
Ha kaxayn baabuurka, ha isticmaalin mishiinnada, iska ilaali wax kasta oo kale oo halis noqon kara haddii aadan feejigneynin, markaa waad ogtahay sida looga jawaabo dawadan.
Waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkii u keento xanaaq, kacsanaan, ama dabeecado kale oo aan caadi ahayn. Waxaa kale oo dhici karta in dadka qaarkood ay is-dilaan ama ay noqdaan kuwo niyad-jaban.
Ka hor intaadan sameynin baaritaan caafimaad, u sheeg dhakhtarka mas'uul ka ah inaad qaadatid dawadan. Natiijooyinka baaritaannada qaarkood ayaa laga yaabaa inay saameynayaan dawadan.
Ha qaadan dawooyin kale ilaa laga hadlin dhakhtarkaaga. Tani waxaa ka mid ah daawooyinka rijeetada ama daawooyinka aan takhtarku qorin (OTCs), dhirta dhirta ama fitamiinada.
Ku kaydi daawada weel xiran heerkulka qolka, ka fog kuleyl, qoyaan iyo iftiin toos ah.
Ka fogow barafka.
Daawada ka fogee carruurta.
Ha haawin daawada ama dawooyinka dhacay ee aan loo baahneyn.
Weydii mihnadlahaaga daryeelka caafimaadka sida loo tirtiro wax daawo ah oo aadan isticmaalin.
Dib-u-eegista Dacomitinib: Sidee Loo Daweeyaa NSCLC?
10ka ugu sareeya aduunka ee iibinta culeyska luminta budada 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet